Xaaladda Shariif Xasan oo kamid ahaa ardaydii lagu xasuuqay muqdisho.
dhakhaatiirta cisbitaalka kenyatta national hospital ayaa sheegay in ardaygii dhaawacnaa ee sharif xasan uu ka badbaaday qaliin lagu sameeyo isagoo ubaahan daawooyin lagula tacaalayo dhaawacii kasoo gaaray dhabarka oo dhakhaatiirtu ay haatan u wadaan.
waxaa dhakhaatiirtu ay sheegeen in 3bilood ama 6bilood kadib shariifka uu ka caafimaadi doono dhaawaca kasoo gaaray burcadii ardayda ku rasaasaysay magaaladda muqdisho iyagoo ka yimid iskuulka ay dhigtaan.
horay waxaa cisbitaalka ugu geeriyootay Faadumo Cabdullaahi Jaamac oo lagu aasay xabaalaha kariyoko ee magaaladda Nairobi oo soomaali fara badan ay kasoo qayb galeen.
Dr Mahamed maxamuud bideey oo maanta ay waraysi la yeelatay idaacadda iqra ee magaaladda Nairobi ayaa uga mahadceliyay dadaalka dadka reer nairobi ay muujiyeen isagoo intaas ku daray in wali jawaab ayna ka helin gudiga ganacsatada islii iyo sharikadaha qaarkood.
bidey waxaa uu idaacadda ka sheegay in uu umahadcelinayo idaacadda Horn Afrik oo abaabul wayn iska xilsaartay arinta ku saabsan ardayda iyo idaacadda IQRA sidoo kale waxaa uu umahadceliayay sharikadaha dadaalka wayn ka muujiyay hawshii ardayda.
Marxuumad Faadumo oo la aasay
Qubuuraha Kariyoko ee Nairobi ayaa marxuumada lagu aasay kaddib markii isfahan laga gaaray Arinta aaska marxuumadda. GUJI.. 6/1/3